8 Tallaabo Oo Aad Kaga Guulaysan Karto Carqalad Kasta - Daryeel Magazine
8 Tallaabo Oo Aad Kaga Guulaysan Karto Carqalad Kasta
” Sida aad ula dhaqanto carqaladaagu waxa ay qeexaan noloshaada” Billy Cox
Qof kasta oo inaga mid ahi waxa uu la tacaalayaa carqalad noloshiisa haysata oo ka hortaagan waxyaabo badan oo uu qabsan lahaa, taas oo ay dad aamisan yihiin in ay tahay wax aan xal loo heli karin ee ay iska samraan; taas oo ka lumisa awoodii fikir iyo ficil ee ay kaga takhalusi lahaayeen carqaladaas haysata, iyaga oo ka laabta gacmaha daawadana meesha ay u kaxayso carqaladaasi. Waxa kaliya ee ay tiigsadaana waxa uu noqdaa calaacal joogto ah iyo cudur-daaro uu qofku ku xeero noloshiisa oo dhan.
Maad ilowday inay noloshu tahay imtixaan iyo shaqo, taas oo mararka qaarkood ah hal xidhaale ay ka guulaystaan in yari!.
Inta badan dadyowga guusha ka gaadhay noloshan ee ka tagay dhaxaltooyo ma guuraan ah oo ay intifaacsadaan malaayiin qof oo ku kala nool daafaha dunida, kuwaas oo aanu magacooda iyo waxtarkooduba aanu dhimanin ilaa marka ay dhintaan ka dib, iyaga oo ka waxtar badan kuwo badan oo helay waqti badan oo ay Dunida ku noolaadaan laakiin noqday rabshad wadayaal nololeed dadka ku xeeran dhiba, nafahoodana cadaab iyo cuduro joogta ah u horseeda.
Ogsoonoow in Carqaladu ka mid tahay sunaha nolosha, waayo Rusushii iyo Nabiyadii ( Naxariis iyo nabad galyo guudkooda ha ahaatee) Illaahay ( S.W.T) soo diray waxay ahaayeen kuwo la kulma carqaladaha; kuwaas oo ka carqalado badnaa dadka ay la noolaayeen waqtiyadoodii.
Dhibaatadu waxay inoogu timaada si aynu wax uga barano, uguna dabaqno nolosheena; dadka intooda badani waxay ku mashquulaan dhibaatada iyaga oo hilmaama casharadii ay ka baran lahaayeen.
Carqaladuhu nolosha kama dhamaadaan se xal lagu dhaafo ayaa jira.
1: U fiirsasho iyo Falanqayn: In aad u fiirsato oo aad falanqayso carqlada ku haysataa waxay kuu sahli kartaa in aad si fiican uga bogato dhibta iyo xaga ay ka timid; deetana si fudud aad ugu siibi karto xiddidada, wax walba bilowga xalkiisu waa fahanka, haddii aanad nolosha fahmin waliga waad jahawareersanaan, haddii aanad fahmin shay aad isticmaali lahaydna waligaa ka faa’idaysan maysid.
Si aad wax u fahantana waa in aad falanqaysaa oo aad baadhitaan qoto dheer u gashaa.
2: Mar walba diirada saar dhanka wanaaga: Iska ilow in aad ku mashquusho dhibaatada carqaladi kuu horseeday; waayo taasi waxay kaa luminaysaa awoodii iyo kalsoonidii aad ku abaari lahayd kagana takhalusi lahayd isla carqalada; waxna kaga baran lahayd. Mar kasta oo aad dhanka wanaagsan ee iftiinka leh wax ka eegto; horseed ayay u noqon kartaa niyad wanaag iyo in aad sii wadan karto halganka aad kula jirto carqaladaha noloshaada ku xeeran.
In aynu dhanka xun wax ka eegno waxay inagu sababtaa, in aynu awood u yeelan wayno helida xal aynu kaga gudubno isla carqalada. Mar kasta oo aad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa waxay ku dhaxalsiinaysaa in aad hesho xalal kala duwan.
Cilmi baadhis (Research) ay samaysay Jaamacad ku taala Dalka Maraykanka ayaa tijaabo ay samaysay ku ogaatay in marka qofku dhanka taban ee aan wanaagsanayn wax ka eegayo aanay suurto gal u ahayn inuu maskaxda ka shaqaysiiyo oo uu baadho xalal kala duwan si uu u helo xalka ugu haboon se kaliyaata uu dhan qudha wax ka eego, taas oo sabab u noqota in uu qofku samayn kari waayo xal ku haboon ka takhalusida carqalada ama uu qaato go’aan uu ka qoomaameeyo, halka dhanka kalena la ogaaday in marka qofku dhanka togan ee wanaagsan wax ka eego, uu awood u yeelan karo inuu maskaxda ka keeno fikiro iyo xalal kala duwan oo u horseedi kara inuu kaga gudbo carqaldaha.
Illaahay waxaynu ka helna hadba wixii aynu ka filano wanaag iyo xumaanba, wanaaji filashadaada aad nolosha ka qabto.
3: Mar kasta Rejo yeelo oo ha quusan: Rejadu waa xanuun biiyaha dhibta iyo werwerka nafsiga ah, mar kasta oo aad rejo leedahay waad ka murugo yar tahay mararka kale.
Quustu waa albaabka ugu horeeya ee laga galo guuldarrada iyo werwerka joogtada ah, Rejadu waxay ku dhaxalsiinaysaa in aad lahaato calool adayg si kasta oo ay xaaladu u adag tahay in aad quusataana maaha dhaqan wanaagsan; waayo ogoow in uu Alle ina faray inaynaan ka quusan Raxmadiisa, taasi waxay ina tusinaysaa sida ay muhiimka u tahay in la lahaado REJO si kasta oo ay u madowdahay noloshu, Ogoow in uu Habeen kastaba ka danbeeyo Iftiin maalmeed qurux badan, Dhibaato kastana ay ka danbayso nolol fiican. Carqaladu haddii aanay ku dilin waxay kuu noqon doontaa sheeko aad ka sheekayso maalin ka mid ah maalmaha noloshaada Aduunyo.
4: Baro Xirfada Xallinta Khilaafaadka: In aad barato xirfadani waxay kaa caawinaysaa in aad wajihi karto Carqalad kasta oo ku soo wajahda xalna u heli karto, aqoon in aad u lahaato xirfada noocan oo kale ah waxay kaa caawin doonta qaybo kala duwan oo noloshaada ah.
5: Ka warqab Naftaada: Mar kasta oo aad kor u qaado ogaanshiyaha iyo ka warqabka naftaada, waxa aad u dhawdahay in aad ka guulaysato carqalad kasta oo soo wajahda naftaada. Dhibaatada ugu wayn ee aynu inta badan kala kulano carqaladuhu waa in ay hoos u dhigaan ka warqabka nafeed ee shaqsiga.
6: Baro Xirfado kala duwan: Mar kasta oo aad kor u qaado heerkaaga aqooneed ee aad korodhsato cilmi, waxa aad ka gudubtay oo kaa go’ay dabar ka mid ah dabarrada Jahliga. Dunidan aynu maanta joogno waxa ugu wayn ee qofka lagu qiimeeyaa waa xirfdaha uu yaqaano; sababtoo ah waxa la ogyahay; qofba qofka uu ka xirfado badan yahay inuu ka xallin ogyahay dhibaatooyinka, noloshiisana awood u leeyahay inuu maareeyo.
7: Dhiirigali Naftaada: In aad dhiirigaliso naftaada mar walba waa shay aad ugu muhiim ah noloshaada iyo guulaha aad ka gaadhi karto, naftaada oo aad dhiirigalisaa waxay kuu horseedi kartaa hanaan nololeed oo wax-soo-saar leh.
8: Samayso Caawiye: Helida shaqsi kaa waayo aragnimo iyo aqoon badan waxay kuu fududayn kartaa in aad ka gudubto carqaladahaaga, qof ku caawiya oo ku siiya talooyin dhaxagal ah wuxuu kuu fufudayn karaa ka gudbida carqalada, baadi doon oo ka ag dhawoow dadka aad bidayso inay noqon karaan kuwo awood u leh inay kula xalliyaan carqaladahaaga.
Awooda carqaladahaagu kaama wayna se adiga ayaa dooran kara in aad isku diciifiso oo aanad waxba ka baran; dhulkana kula gasho oo ay adiga ku burburiso noloshaadana baabiiso, ama aad wax ka barato kuna dabaqdo noloshaada oo aad ka dhigato kaabadihii figta sare aad ku gaadhi lahayd.
Naftaada markaad habayso
Nitaaqana aad u diido
Naruurana aad la doonto
Nuurkii noloshaad heshaayo
Naxliyo xumahana nacdaa
Naq dooglena aad dagtaa
W/Q: Xamse Siciid Maxamed (Xamse Tudhaale) ( Dhiirigaliye nololeed iyo Qoraa ka faallooda arimaha horumarinta Shaqsiyada)
References: Mariashriver.com inc.com emilysquotes.com
9 Tallaabo Oo Aad Uga Takhalusi Karto Daciifnimada 10 Tallaabo Oo Aad Ku Soo Jiidan Karto Qalbiyada Dadka 10 Tallaabo Oo Aad Ku Kasban Karto Asxaab Badan Oo Wanaagsan 5 Tallaabo Oo Aad Kusoo Jiidan Karto Qofka Aad Jeceshahay